Dood: Sidee nimanku u noqdeen ururro caalami ah oo ku takhasusay gabdhaha? Gabdhaha maalmahan waxay ragga u qaataan ururada gaarka ah ee caalamiga ah; badiyaa waa ...
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 14, 2020 00: 20 No Comments
BB, waan gaajoonayaa. Halkaas waxaad ka noqonaysaa Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP);
BB, Waxaan u baahanahay 200 kun si aan u furo fagaaraha timaha. Halkaas waxaad ku noqonaysaa Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF);
BB, Waxaan hayaa xanuunsan ma imaan kartaa Halkaas waxaad ka noqoneysaa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO);
BB, ilma adeerkay waa inuu aadaa iskuulka (UNESCO), ma awoodo. Xaaladdan oo kale, adigaa ah (UNICEF);
BB, walaashay waa inay aadaa waxbarashada, si toos ah, waxaad noqotaa barnaamijka horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP);
BB, Waxaan u baahanahay ipad ama android. Halkaasna waxay kugu geyn doonaan Ururka Caalamiga ah ee la technology (ITU);
BB, waxaad shaqo uga heli kartaa walaalkeyga yar, halkan waxaad tahay Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO).
Oh - gabdhaha! Walaalahay waa is beddelaan: in la beddelo inta badan waa in la isa dhaliyo naftaada "Gabdhuhu waxay doorbidaan inay noqdaan qurux, halkii ay ka caqli yaraayeen, sababtoo ah ragga dhexdooda waxaa jira dogoon ka badan kuwa indhaha la '."
Sep30 04: 48